Wasiirad Anisa oo ka hadashay buug lagu qeybiyay Puntland – Codkasoomaalida.com
Wasiirad Anisa oo ka hadashay buug lagu qeybiyay Puntland	Wasiiradda Haweenka Puntland Anisa Xaaji Muumin ayaa Mar kale si adag uga jawaabtay buug lagu qoray in qofku Diinta uu rabo qaadan karo, dadka isku jinsiga ahna isguursan karaan ,kaaso 10-ka bisha Disembar oo ahayd maalinta xuquuqul insaanka laga qaybiyay xalfad wasiiradu joogtay.
Buugaan ayaa ka koobna 30 qodob waxaana jadligiisa sare ku qornaa inay iska kaashadeen United Nations Human Rights iyo UNSOM.wuxuuna ku qorna Luuqadda Soomaaliga, iyadoona Nuqalka la qaybiyay logu magacdaray ”Baaqa Caalamiga ee Xuquuqul Insaanka”,kaaso qodobadiisa 16 iyo 18 aad ay si cad uga horimaanayeen Diinteena Suuban ee Islaamka.
Wasiiradda Haweenka Puntland Anisa Xaaji Maamin ayaa tiri Buugga loogu magacdaray “Baaqa Caalamiga ee Xuquuqul-Insaanka” ayay Hay’ad ka mid ah kuwa Qaramada Midoobay si qarsoodi ah ku soo galisay goobta shirka lagu qabtay oo aheyd Jaamacada Bariga Afrika, is la markaasna qeybisay wakhti shirka lagu guda jiray, taas oo mar danbe ay ogaadeen Hay’adda Xuquuqul Insaanka Dowladda Puntland iyo Wasaarada Horumarinta Haweenka iyo Arimaha Qoyska.
Sidoo kale,Anisa Xaaji Muumin, Wasaarada Horumarinta Haweenka Puntland ayaa QM dusha uga tuurtay mas’uuliyadda Buugaasi waxaana ay tiri “Waxa dib laga ogaaday “Baaqa Caalamiga ee Xuquuqul Insaanka” qodabka 16-aad iyo qodabka 18-aad in ayna waafaqsaneyn Diinteena suuban ee Islaamka ah iyo Dastuurka dowladda Puntland,cidii keentayna ay masuuliyadeeda ay qaadayaan”.
Ugu Danbaytii hadal haynta Buugaan ayaa shalay oo Jamca ah si weyn loga dareemay Deegaanada puntland kadib markii wasiirada Haweenka Puntland ay sheegtay inay wax ka ogayn buugan diinta islmaanka ka dhanka ah.
Author adminPosted on December 17, 2016December 17, 2016Categories Featured, WARARKA	Post navigation
Previous Previous post: Why Mogadishu’s former mayor wants to be Somalia’s presidentNext Next post: 23 ruux oo cudurka daacuunka ugu dhintay Jalalaqsi (Dhegeyso)